Ukudoba Amachibi Ayizigidi | Martech Zone
Ukudoba Amachibi Ayizigidi
NgoLwesibili, Agasti 25, 2009 NgoMsombuluko, Agasti 24, 2009 U-Adam Encane
Ngolunye usuku bengidla isidlo sasemini neqembu labantu abasebenza ngokuyinhloko kuma-ejensi wokukhangisa, amafemu wokukhangisa nawokumaketha.
Douglas Karr, umsunguli we Martech Zone, ubekhuluma neqembu ngemithombo yezokuxhumana kanye nokusetshenziswa kwayo njengethuluzi lokumaketha. Enye yezinto ayishilo ishaye intambo nami.
Ngizocacisa nje ... UDoug uthe ukukhangisa bekuvame ukuba lula, ubunamadlozi amakhulu (i-Phrinta, i-TV, iRadio) ongathenga kuyo futhi obekufanele ukwenze ukuthola ukuthi amaphesenti wesabelomali sakho ngamunye athola liphi . Ubuyikho empeleni ukudoba amakhasimende olwandle.
Manje nge social media, ukumaketha amaselula, blogs, amanethiwekhi omphakathi nazo zonke ezinye izindlela ezintsha zokuxhumana awusadobi olwandle.
Abathengisi manje banezigidi zamachibi okudoba kuwo. Njengokudoba, ungachitha isikhathi sakho nemizamo yakho kuzo zonke izindawo ezingafanele. Futhi, njengokudoba, udinga ukuthola abasebenzela (amachibi) abakusebenzelayo futhi ugxile kulabo.
Bengicabanga ukuthi lesi yisifaniso esihle sokumaketha emhlabeni wanamuhla. Ukumaketha oku-inthanethi kanye social media kulethe ushintsho olukhulu endleleni abathengi abalindele ukuxhumana ngayo.
Ngabe inkampani yakho isazama ukudoba olwandle?